देशै हल्लाउने एउटा शंका, आधार भेटिएन, के हो वास्तविकता ? « Postpati – News For All
देशै हल्लाउने एउटा शंका, आधार भेटिएन, के हो वास्तविकता ?
जेठ २१, काठमाडौँ । सोलखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरीबाट २५ कोस टाढा पर्छ महाकुलुङ गाउँपालिका। उक्त गाउँपालिका सोमबार दिनभर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा परिरह्यो।
तस्बिर: अन्नपुर्ण पोष्ट
यो खबर शिवप्रसाद ढुंगाना/ किशोर बुढाथोकीले अन्नपुर्ण पोष्टमा लेखेका छन् । सञ्चारमाध्यमका लागि त्यो ठाउँ दिनभर चासो र खोजीको विषय बनिरह्यो। कारण हो गाउँपालिका–३ छेस्काममा रहेको प्रहरी चौकी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताकार्यकर्ताले रातभर कब्जा लिएको ‘सनसनीपूर्ण समाचार’।
सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र मगरले बाहिर हल्ला आएजस्तो केही नभएको दाबी गरे। उनले विप्लवको गतिविधि बढेकाले सुरक्षा परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बाहिर धेरै हल्ला भएको छ, त्यस्तो केही होइन। सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ, प्रहरी परिचालनचाहिँ भएको हो।’
विप्लवका प्रवक्ता खडकबहादुर विश्वकर्माले सोलखुम्बुमा पार्टीद्वारा प्रहरी चौकी आक्रमण भएको भन्ने नियोजित र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारको खण्डन गरेको छन्। उनले सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने पार्टी नीति नभएको र त्यस प्रकारको घटना नभएको पनि वक्तव्यमार्फत प्रस्ट पारेका छन्।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले विप्लवका कार्यकर्ताले सोलुखुम्बुको चौकी कब्जा गरेको र आक्रमण प्रयास गरेको कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी कतै गस्तीमा निस्किएका बेला कोही नयाँ मान्छे चौकी छेउछाउ हिँडेका कारण ‘विप्लव’ कै कार्यकर्ता हुन् कि भनेर स्थानीयले आशंका व्यक्त गरेका हुन सक्छन्।’ गाउँपालिकाको गुँदेलमा विप्लवले तालिम केन्द्र नै चलाएको चर्चा सुरक्षा निकायमा छ। त्यस क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पैदल र हेलिकोप्टरबाट निगरानी गरिरहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताए। छेस्काम, गुँदेल, बुँगलगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा निकायाले हवाई गस्ती गरिरहेको छ।
ओखलढुंगामा उच्च सतर्कता
शनिबार राति विप्लवका हतियारधारी समूह गाउँ पसेको हल्ला आएपछि २ बजेबाटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाले प्रहरीलाई गस्तीमा खटायो। सोलुखुम्बु सिमानामा रहेको चिसंखुगढी गाउँपालिकाका भूभागमा विप्लवको समूह आवतजावत गरेको हुन सक्ने अनुमानमा प्रहरी खटाइएको थियो।
सोलुखुम्बुसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा ओखलढुंगाबाट सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ। छिमेकी जिल्लाको प्रभाव र केही सूचनाका आधारमा जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता उच्च अपनाइएको ओखलढुंगाका डिएस्पी पुष्पराज मल्लले बताए। उनले भने, ‘हामी सतर्क र तयारी छौं, थप बताउन मिल्दैन। प्रहरीले सूक्ष्म ढंगले निगरानी गरिरहेको छ।’ शनिबार राति विप्लव गाउँ पसेको हल्ला आएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ओखलढुंगाका पूर्वी भागमा समेत प्रहरी परिचालन गरेको छ।
सुरक्षा निकायले सोलुको घटनालाई आधिकारिक पुष्टि नगरे पनि विप्लवको गतिविधि बढेकाले प्रहरी परिचालन गरिएको स्वीकार गरेका छन्। यसले सर्वसाधारण र सुरक्षा निकायमा समेत चिन्ता र असुरक्षा बढेको छ।
प्रहरी जनशक्ति कम भएको एवं हतियार पनि पर्याप्त नभएकै कारण त्यहाँ कार्यरत प्रहरीले सुरक्षित हुन र आक्रमणबाट बच्न चौकी छाडेको स्रोतले बतायो। सुरक्षा स्रोतका अनुसार चौकी छाडेका प्रहरीले गाउँ नजिकैको अग्ला रूखमा चढेर रात बिताएका थिए।
महाकुलुङ क्षेत्रमा ३ दिनदेखि विद्युत् अवरुद्ध छ। बिजुली नभएका कारण नेपाल टेलिकमद्वारा वितरित सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको मौका छोपेर चौकीमा आक्रमण प्रयास गरिएको प्रहरीको अनुमान छ।